Ikheli: phansi 6th, Leishi Industrial Zone, No.1119 Guanlan Guanguang komgwaqo, Longhua wesifunda omusha, Shenzhen, China
Izinombolo zocingo: 0086 0755-23773942
Ifeksi: 0086 0755-23773942
"Chinese New Year" Holiday Isaziso
Ngenxa "Chinese New Year" luyeza, inkampani yethu uya ukuthatha iholidi eside kusuka 10 February, 2018 4th March, 2018. Phakathi iholide, sizokwenza sime ukukhiqiza kwethu, kodwa uMnyango yokuthengisa kuyoba namanje ku-intanethi. Asikwazi ukwamukela oda entsha futhi ahlele kubo lapho siqeda th ... Funda kabanzi »
Indlela ukugcina izibopho lesikhumba iwashi?
isikhathi Iposi: Jan-12-2018
Ngokuvamile ukukhuluma, iwashi band ngokuvamile eyenziwe ingwenya lesikhumba, ushaka lesikhumba, isibankwa lesikhumba, Intshe lesikhumba noma cowhide. Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi uhlobo lesikhumba onawo, bands uzobe ukubanjwa lukhuni njengoba isikhathi siqhubeka. Kodwa uma ngonanzelelo nokugcinwa imichilo, inkonzo yalo ekuphileni c ... Funda kabanzi »
Uyini iwashi waterproof?
isikhathi Iposi: Nov-18-2017
Ngokuphathelene ukusebenza waterproof ka iwashi, standard international has ilungiselelo ecacile: silindile ebonisa ukuthi manzi, indinganiso aphansi wukuthi kumele bengagcini ukugcwalisa amanzi e 20 amamitha amanzi ukujula. 30 amamitha izindlela waterproof silindile okufanele bengagcini ukugcwalisa amanzi e 30 amamitha amanzi Dept ... Funda kabanzi »
Celebration! Factory ukunwetshwa!
isikhathi Iposi: Septhemba-10-2017
As the factory’s scale is enlarging, Phenloxy Watch Co., Ltd relocated from the former location, ROOM 715 Shangmei Times Building, 4th Floor, No.38, Huimin 1st Road, Guanlan Town, Longhua District, Shenzhen on 15th, Sep, 2017. 1500 square meter, over one hundred employees, our scale is enla...Funda kabanzi »